Traintravel မော်ကွန်း | စာမျက်နှာ2၏ 16 | တစ်ဦးကရထား Save
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ပုံစံတိုင်း၌, မည်သည့်နိုင်ငံနှင့်၎င်း၏စီးပွားရေး၏ကျောရိုးဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာသာလမ်းများမှတဆင့်ဖြစ်ခဲ့သည်, လက်ရန်းတန်း, ပြီးတော့ငါတို့ကမ္ဘာကြီးကိုအမှန်တကယ်ဖြစ်တာထက်အများကြီးသေးငယ်လာတဲ့နည်းနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ခဲ့တယ်. ထို့ကြောင့်, ငါတို့ကြည့်တဲ့အခါ…